Otu esi eme ka oku WhatsApp rụọ ọrụ | Site na Linux
Ọrụ ndị a ma ama maka izi ozi mkpanaka, WhatsApp, amalitela ime ka ọkpụkpọ ọkpụkpọ na - akpọ oku ka ọ dị mfe ndị ọrụ ya niile Android na iOS (na mbipute 2.11.508 nke ngwa). Na Fraịdee, Machị 27, ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ ka enyere ọrụ a aka na ekwentị ha ma jiri ya wee malite ịkpọ oku.
Ihuenyo nke atụmatụ ọhụrụ a pụtara na Reddit, na mmasị ị nweta oku efu na-agbasa. Ọ dị mfe iji yana na ọnụ ọchị (ọ na-eji data ma ọ bụ n'efu ma ọ bụrụ na ị na-eji netwọk n'efu ma ọ bụ wifi)
Otu esi eme ka WhatsApp rụọ ọrụ site na nkwụsị
Otu esi eme ka oku WhatsApp rụọ ọrụ site kapeeti
N'ime nkuzi a anyị ga-ahụ otu esi eme ka oku WhatsApp rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi etinye atụmatụ ọhụrụ a, biko soro usoro ndị a:
Ihe kacha mkpa iji wụnye oku WhatsApp:
Gam akporo version 2.1 ma ọ bụ karịa. Maka iPhones ma ọ bụ ngwaọrụ iOS ndị ọzọ, achọrọ beta ụdị 2.12.0.1.
Ejila mbadamba nkume.
Etu esi eme ka akpọku ndị WhatsApp na ndị ọrụ gam akporo
Iji mee ka njirimara a, ndị ahịa nke android Ha aghala imelite ngwa ha rụnyere na ama ha nwere nke izizi.
pịa ebe a ibudata kacha ọhụrụ nke Whatsapp, nke ị nwere ike iji kpọọ oku.
Mgbe nke ahụ gasịrị, free WhatsApp oku ga-arụ ọrụ, ọ bụ ezie Ee e ọ ga-arụ ọrụ ruo mgbe nzọụkwụ ọzọ.
Ozugbo etinyere ngwa ahụ n'onwe ya, ọ dị mkpa ịchọta onye ọrụ ọzọ nwere ọfụma na ọrụ a ma gwa ha ka ha kpọọ anyị.
WhatsApp etinyela iwu nke mmegharị a site na ịkpọ òkù iji zere ịuraụ netwọk ahụ.
Nke a ga-ịgbalite ihe olu na-akpọ na WhatsApp definitively, ya bụ, ị nwere ike ịkpọ oku na kọntaktị gị ma ọ bụrụhaala na ị nwere njikọ Internetntanetị.
Cheta ọnụahịa nke oku metụtara mmefu data:
Otu nkeji nke oku WhatsApp na-ewe ihe dịka 0,15 - 0,20 MB na njikọ 3G. Nke a pụtara na a 5 nkeji oku na-erepịakwa 1 MB. Ikwesiri iburu n'uche na site na ntaneti 3G, ihe di nma di nma, obughi na 2G, ebe ihe oriri kariri (0,35 MB kwa nkeji).
Ọ dị mma ịkwanye atụmatụ a ma ọ bụrụ na ịnweghị ụgwọ nke opekata mpe 1GB kwa ọnwa.
Ma gị, ị nweelarị ụtọs free WhatsApp oku? Egbula oge iji rụọ ọrụ ha nzọụkwụ site nzọụkwụ nkuzi!
Echefula isiokwu anyị banyere - >> Atụmatụ aghụghọ na oku WhatsApp
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Otu esi eme ka oku WhatsApp rụọ ọrụ
Achorom kam kpo lumia 625
Enweghị m ike ịgbalite oku na lumia 625 m kedu ka m ga - esi melite whatsapp m
oku maka WhatsApp na wp anaghị arụ ọrụ mana nke ahụ bụ naanị maka android bụ n'ihi na ịnweghị ike ịgbalite ya 🙂
Achọrọ m oku na whatsapp m
Zaghachi ka dayana mendoza martinez
Ọ bụ maka IOS mụta ịgụ ihe
Mụta ịgụ nke gị n'ihi na ọ bụ maka ma iOS na android
Iji rụọ ọrụ oku, gwa onye ọzọ nke emelitere whatsapp ka ịkpọọ gị ma ọ ga-emelite na-akpaghị aka
Zaghachi gabriela garcia
NT .KWU dijo
Oku na-adighi emelite na MY LUMIA 630
n'ihi na na na ha adịghị etinye a ụbọchị na posts
Ekwentị Zuum kwesịrị ya